Xildhibaan Aden Bare Ducaale oo meesha ka saaray in ay sun ku ... | Universal Somali TV
Xildhibaan Aden Bare Ducaale oo meesha ka saaray in ay sun ku jirto sokorta dibada looga keeno Kenya
Barlamaanka dalka kenya ayaa mar labaad gaashaanka u daruuray warbixin ay soo saareen gudiga beeraha iyo ganacsiga oo ah in sokorta sharci darada ah ee dibada uga imaado kenya ay ku jirto maado sun ah kadib baaritaano ay sameyeen.
Madaxa golaha aqlabiyada barlamaanka kenya ahna xildhibaanka laga soo doortay degmada Garissa mudane Aden bare ducaale ayaa waxaa uu sheegay in ay sokorta tahay mid ku wanaagsan caafimaad ahaan shacabkana ay isticmaali karaan.
Mr ducaale ayaa dhanka kale sheegay in meel ka dhac ay aheyd in wasiirka maaliyada Henry Rotich dhigiisa arimaha bulshada afrika u qaabilsan kenya Adan Mohamed iyo wasiirkii hore ee beeraha Willy Bett lagu dhaleeceyo musuq maasuq aan jirin.
Madaxa golaha tirada yar ee barlamaanka kenya mr John Mbadi ayaa dhankiisa difaacay wasiirka maaliyada iyo wasiirkii hore ee beeraha waxaana uu sheegay in aysan jirin musuq maasuq ay ku kaceen.
Dowlada kenya ayaa bilo ka hor waxay sameysay howlgalo ka dhan ah sokorta sharci darada ku gasha dalkaasi waxaana ay arintaas saameyn ku yeelatay qiimihii sokorta lagu kala iibsan jiray.
Xildhibaan Aden bare du,aale ayaa horay u sheegay in aysan u dulqaadan doonin in dowlada ay howlgaladeeda ku aadan ka ganacsiga sokorta ay ka sameyso oo kaliya xaafada islii ee magaalada Nairobi.
Somalida ku dhaqan magaalada caasimada ah ee nairobi iyo kuwa gobol ka waqooyi bari ayaa iyana waxay si gaar ah u taabatay arintaan maadama soomalida ay ka mid tahay qowmiyadaha ugu isticmaalka badan sokorta ee ku nool gudaha kenya.
Kan-xigaTirada dadkii ku dhintay duqeyntii sa...
Kan-horeSalva kiir oo cafis bani aadanimo u f...
40,460,412 unique visits